Xasan SHeekh oo sheegey in deymihii dalka lagu lahaa ay wada bixiyeen. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Xasan SHeekh oo sheegey in deymihii dalka lagu lahaa ay wada bixiyeen.
Xasan SHeekh oo sheegey in deymihii dalka lagu lahaa ay wada bixiyeen.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo hadal ka jeedinayay muanaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose, ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya bixisay intii badneyd deymihii lagu lahaa Soomaaliya mudadii dheereed ee dalku bur burka ku jirray.
”Waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ogaado, dowladda waxaa ay bixisay Qaaraamaadkii ama Qaaraankii ku ururay dhowrkii sanno ee aan ka maqneyn hay’addaha caaalamiga ah, hadii ay ahaan lahaayeen IGAD, Midowga Africa iyo Hay’addo kale oo caalami ah intoodii badneyd waa bixinay, ” ayuu yiri madaxweynaha dowladda Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in arintan ay ku timid dadaal dheeraad ah oo ay sameysay dowladda uu madaxweynaha ka yahay oo siweyn ugu dhaba-gashay ayuu yiri arintan, oo sidda uu sheegay lagu guuleystay in qaar badan oo ka mid ah la bixiyo kuwa kalana laga cafiyay Soomaaliya.
”Arintan waxaa ay ku timid dadaal dheeraad ah oo ay bixisay dowladda, oo ku guuleystay in deymaha qaarna la bixiyo, qaarna laga cafiyo, halka inta kale ee soo hartayna aan u sameysanay jadwal aan ku bixino” ayuu yiri madaxweynaha.
Hadalka m/weynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo shirkado gaara lagu wareejiyey dhismayaal dawladu laheyd oo uu ugu danbeeyey dhisme ay laheyd wasaarada Maaliyada oo ku taaley degmada X/weyne,taas oo dad badan maalmo ka hor debedda loogu soo daadshey alaabahooda iyagoon wax gacana ka helin dawlada uu Xasan sheekh hugaamiyo.
Ugu danbeyntii, madaxweyne Xassan Sheekh ayaa sheegay in arintan sababtay in Soomaaliya dib uga soo muuqato shirarkii waaweynaa ee caalamka.
Previous articleGanacsadaha caanka ah C/rashiid Dahabshiil oo ku baaqey in la mideeyo Africa.
Next articleDalka Suuriya Magaalada Xalab oo xaalad xumi ka taagantahey iyo dagaalo ku socda.